Ịtụgharị ọdụ ụgbọ elu ka ọ bụrụ ohere ego ijeri dollar maka obodo US
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ịtụgharị ọdụ ụgbọ elu ka ọ bụrụ ohere ego ijeri dollar maka obodo US
Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • News • Transportation • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ọrịa COVID-19 etinyela nrụgide mmefu ego ọhụrụ na ụfọdụ steeti na nke ime obodo. Otu ngwá ọrụ nke nwere ike inyere ha aka ịnagide bụ nke a na -akpọ "ịkpata ego," nke a na -akpọ mgbe ụfọdụ dị ka "imegharị ihe akụrụngwa." Dị ka Australia na-eme na obere ikike ikike US, echiche a bụ ka gọọmentị ree ma ọ bụ gbazite akụ na-emepụta ego, na-emepe ụkpụrụ akụ ha ka ejiri ya mee ihe maka ebumnuche ọha ndị ọzọ kacha mkpa.
Dabere na data sitere na ọdụ ụgbọ elu gara aga na mgbazinye ogologo oge gburugburu ụwa, ọmụmụ na-egosi na naanị na ọdụ ụgbọ elu Hawaii abụọ nwere ike ịba uru ruru ijeri $ 3.6 jikọtara ọnụ site na mgbazinye ogologo oge maka ụlọ ọrụ ọdụ ụgbọ elu nkeonwe na ndị na-etinye ego. AKỤKỌ fma ọ bụ ihe atụ.
Ọmụmụ ihe ahụ chọpụtara na na Hawaii naanị ọdụ ụgbọ elu Honolulu Daniel K. Inouye nwere ike iwepụta ijeri dọla 2.7 na ọdụ ụgbọ elu Kahului dị na Maui nwere ike nweta nde $ 935 site na mgbazinye ogologo oge.
Agbanyeghị, ọdụ ụgbọ elu nwere ụgwọ karịrị ijeri $ 2.5. Mgbe akwụsịrị ụgwọ ọdụ ụgbọ elu steeti dị ugbu a, dị ka iwu gọọmentị etiti siri chọọ dị ka akụkụ nke nkwekọrịta mgbazinye ego ọ bụla, ụgbụ steeti ahụ na-enweta site na mgbazinye ogologo oge nke ọdụ ụgbọ elu abụọ a ga-agbakọta ihe ruru ijeri $ 1.1.
N'okpuru iwu ọdụ ụgbọ elu gọọmentị etiti nke United States, ndị nwe ọdụ ụgbọ elu gọọmentị anaghị anabata ego ọ bụla nke ọdụ ụgbọ elu; a ga -edobe ego niile dị otu a n'ọdụ ụgbọ elu ma jiri ya maka ebumnuche ọdụ ụgbọ elu. Na mba ofesi, enweghị mgbochi dị otú ahụ. N'ime afọ iri atọ gara aga, ọtụtụ gọọmentị ewepụtala ma ọ bụ nyefee ọdụ ụgbọ elu buru ibu na nke ọkara wee nweta uru ego ozugbo site n'ime otú ahụ.
Na 2018, dị ka akụkụ nke iwu na-enye ikike nchịkwa nchịkwa Federal Federal, Congress mepụtara ihe dị mkpa na mmachi dị ogologo. Mmemme Mmekọrịta Ọdụ Ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ (AIPP) na-enyere ndị nwe ọdụ ụgbọ elu gọọmentị aka ịbanye nkwekọrịta ogologo oge nke ọha na onwe (P3)-ma jiri mgbazinye ụgbụ na-enweta maka ebumnuche gọọmentị.
Ọmụmụ ihe a na-enyocha ike ọdụ ụgbọ elu ọha na nkeonwe ọdụ ụgbọ elu maka ọdụ ụgbọ elu iri atọ na atọ nke nnukwu obodo na nke etiti obodo, gọọmentị na steeti nwere. Ọ na-enweta data sitere na ọtụtụ ọdụ ụgbọ elu ọha na nke onwe nke mgbazinye ego mgbazinye ego n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya iji tụọ ihe nke ọ bụla n'ọdụ ụgbọ elu 31 nwere ike baara ndị na-etinye ego uru.
Nnukwu ọnụ ahịa bụ ihe ọdụ ụgbọ elu nwere ike ịba uru n'ahịa ụwa. Ọnụ ahịa ụgbụ na-eburu n'uche koodu koodu ụtụ US nke chọrọ ka a kwụọ ụgwọ agbụ n'ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụrụ na mgbanwe njikwa, dị ka mgbazinye ogologo oge. N'ihi ya, atụmatụ ego efu bụ ọnụ ahịa dị oke ọnụ na -ewepu uru nke agbụ ọdụ ụgbọ elu pụtara ìhè.
Ebe ọ bụ na mgbazinye ụgbọ elu P3 bụ ihe a na -adịghị ahụkebe na United States (naanị ihe atụ dị ugbu a bụ San Juan, ọdụ ụgbọ elu Puerto Rico), ọmụmụ ahụ na -akọwa ụzọ atọ nke ndị nwere ike itinye ego na ọdụ ụgbọ elu US.
Nke mbụ bụ ụwa na -eto eto nke ụlọ ọrụ ọdụ ụgbọ elu ụwa, gụnyere otu ọdụ ụgbọ elu ise kachasị ukwuu n'ụwa, nke na -arụ ọrụ na -eto eto nke ọdụ ụgbọ elu ụwa kachasị elu site na ego ha na -enweta kwa afọ.
Nke abụọ bụ ọtụtụ ego ntinye ego akụrụngwa, nke welitere ọtụtụ narị ijeri dollar iji tinye ego dị ka nha nha na akụrụngwa akụrụngwa gbaziri agbaziri P3 n'ụwa niile.
Akụkụ nke atọ bụ ego ezumike nka ọha, nke na -eji nwayọọ nwayọọ na -agbasawanye itinye ego ha na akụrụngwa ka ha wee gbubilata ọnụego ọnụego nloghachi ha na itinye ego.
Ụdị atọ nke ndị ọchụnta ego nwere ogologo oge, ọ dịkwa mma itinye ego na ịzụlite ụdị akụ a.